Namuhla ngempela isikhathi esinzima ngisho umuntu enamandla kakhulu futhi uyazethemba uzama acele ukwesekwa (nakuba hhayi ngempela ocacile) omlingo. Talisman, ngokusho kongoti, kungaba cishe iyiphi into, kodwa aqinile futhi esebenza kahle nguye yedwa ukuthi lihlotshaniswa umlando namandla abantu bayo. Omunye omdala Slavic iziphandla kuyinto ngembazo ka Perun - unkulunkulu ukuduma nokunyazima kombani, okuyinto akwazi ukunqoba leNyoka, okuyinto ugxile ukukhanya. Masikhumbule ukuthi kwaba unkulunkulu wokuduma ku kela onkulunkulu lwamaSlav futhi kungani isibhamu sakhe ubhekwa kwezinkulumo ezinamandla kakhulu iziphandla magic?
Izinkolelo lwamaSlav, Perun - unkulunkulu wokuduma amafu, ekudumeni kwezulu nasekubanikeni, nophawu bobukhosi, umxhasi retinue kwesikhulu kanye nabo bonke abantu bempi. Wazalwa Lada, unkulunkulukazi wokukhanya nentwasahlobo, uthando nomshado, kusukela Svarog, unkulunkulu umlilo. Igama Perun esichazwa ngokuthi "ukushayisa". Wayaziwa ngamagama ahlukene e izizwe ahlukahlukene nabantu. Ngezinye lwamaSlav entshonalanga walibiza Provo, Belarus - Pyarun, futhi Lithuania - Perkunas. Ngokwenkolelo zaseScandinavia, unkulunkulu wokuduma ngokuthi Thor, Celtic - Tarinis.
Izincazelo unkulunkulu wokuduma ezizweni ezahlukene zifana. Wayefanele ngesilevu abomvu, izinwele ezimnyama ngesiliva, ezifanayo ngombala efwini isiphepho. Perun ihamba, ngokuvumelana lwamaSlav esibhakabhakeni ipera noma inqola usetshenziswe ngayo likhale futhi zamahhashi ezimhlophe ezinamaphiko.
UNkulunkulu wayeqinisa ehlome lokuduma kwezulu elidumayo, umbani, inkemba, umkhonto, ezihlukahlukene maces nangezimbazo. Ithuluzi enamandla kakhulu arsenal yayo ubhekwa ngembazo Perun sika. LwamaSlav bebekhona izinsalela ngamathuluzi lasendulo, ngobuqotho wayekholelwa ukuthi kwakuwumsebenzi bhasi ka ayimikhonto nemicibisholo, ukuthi unkulunkulu wokuduma kwezulu nombani kwehla ngesikhathi izimpi. zobuciko okunjalo baziswa kakhulu lwamaSlav, bathi ukuphulukiswa futhi izakhiwo imilingo.
Ngaphezu kokuba ukubukelwa Perun alwayo, amasosha, wayengunkulunkulu iziphepho, ekudumeni kwezulu nasekubanikeni, uyena obangela ekuphatheni izakhi ulawule ezinye izici zokuphila komuntu.
Ezinsukwini ubudala, abantu babekholelwa ukuthi entwasahlobo isiphepho sokuqala wayengunkulunkulu umbani wembula amafu emhlabathini ezichithekile "esibhakabhakeni izinyembezi" - imvula. Ngaphezu kwalokho, Perun kulandela ukubulawa imithetho, futhi uma kwenzeka ukwephulwa kungenzeka sona isomiso nendlala. Ukuze ukungaziphathi kahle abantu nobubi babo nokuduma kungaba bashise zokuhlala abantu.
Ngakho, Perun, ngokuvumelana izinkolelo Slavic, kwaba:
isiphepho unkulunkulu umbani kanye nokuduma;
umbusi, kulandela ukuqaliswa kwemithetho;
nomvikeli zonke amasosha owalwela ezweni lawo, umhlaba kanye umndeni;
uphawu igunya lasebukhosini.
Esikhathini yesibili isithombe ngembazo Perun nge onqenqemeni yesimanje.
Njengoba ayekhuphuka akhulekelwe?
unkulunkulu onjalo uphambene Perun, lapho kwakuxhomeke izimpilo zabantu, engcwele zadalwa ekhatsi Kiev futhi Novgorod, lapho senziwa ngokukhethekile ezithombeni efakiwe. umzimba nokuduma likankulunkulu yayingasebenzi kusukela kwesihlahla se-okhi, kubhekwa uphawu amadevu akhe, nezindlebe zakhe balahlelwa ngegolide, ikhanda - esiliva, imilenze - ezensimbi. Yena yayiphethe Mace jeweled, okusikhumbuza uziphu. Ngaphambi isithombe uvutha umlilo, olusekela umpristi ekhethekile. Uma ngasizathu simbe umlilo ucime, umpristi ophethe kwayo wabulawa.
abavubukuli Modern wathola ezingcwele kwakunamadoda amaningi ngokuzinikela Perun, okuyinto zadalwa ngaphansi esibhakabhakeni evulekile. Maphakathi isithombe kushintshwe ngaphambi yafakwa i-altare womhlatshelo yensimbi indandatho. Emhlabeni isithombe Perun Ngemba nelesithupha lapho omlilo.
imihlatshelo Kubi uNkulunkulu wenza ngokuvamile ngempela, kodwa endaweni enkulu ngosuku olwandulela impi, izinhlekelele zemvelo futhi izibhelu zomphakathi. Inani elikhulu iminikelo zaba Day Perun sika, ligujwa 20 Julayi.
Lapho aqala iziphandla?
Ngokusho idatha etholwe ngenxa kumbiwa okutheni, umgexo wenhlanhla "Axe ka Perun" waqala ukwenza Kyïv kakade X leminyaka. Kwakulapho ukuthi ezimbili-eksisi le nkathi zitholakele.
Okunye okutholakele kwaba imbazo isibekiwe eyenziwe phambili, okuyinto eye wahlushwa iphethini lemigqa okufanayo, imibuthano kanye zigzags. Izikhali okuphindaphindiwe uhlobo eminingi yasendulo Russian of ngembazo ngensingo ububanzi futhi ekhosombeni elingaphakathi. Phakathi nokubusa izikhulu lokuqala Kievan Rus, mayelana X leminyaka, Perun kwaba ongumvikeli amasosha futhi kwesikhulu. Igama unkulunkulu wafunga izikhulu Oleg, Igor futhi Svyatoslav nge retinues yabo ukuphetha izivumelwano amaGreki. Kusukela zethusi XI leminyaka waphonsa steel mass ngesimo Russian oberegi ngembazo, okuyinto zithandwa emadolobheni ezifana Suzdal Drogichin Novgorod et al.
Ingabe umuntu osiza?
Namuhla Perun ngembazo kubhekwa talisman yesiqhwaga. Ngokuvamile banginiké amasosha ukuphindaphindeka isibindi anamandla, ukwandisa amandla, futhi ukuheha inhlanhla kwezamabhizinisi ezempi. Nokho, idatha yemivubukulo wabonisa ukuthi lokhu njengentelezi ku XI-XII amakhulu eminyaka futhi kabanzi abesifazane abakhulekela uNkulunkulu ka-Thunder wathembela ngacela isivikelo sakhe nokuba ukusekelwa. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi esithi asifane ukubaluleka ngembazo Perun izinguquko yakhe eziningana futhi isetshenziselwa ukuvikela amathonya amabi magic, ezifana neso elibi futhi spoilage, kanye ukuheha inhlanhla ukuqaliswa amapulani wakhulelwa.
Ngokuvamile lokhu njengentelezi sasenziwe ngesiliva noma ithusi lazo zonke osayizi. Ukuze wandise umzimba ozivikela ku lento imilingo isicelo izimpawu ezikhethekile, izimpawu kwelanga nombani. Isiliva ngembazo Perun - uphawu umholi, umholi. Yena lifanekisela ubumsulwa izinhloso, amandla ngokomoya nangokwenyama. Ngaphezu kwalokho, lokhu njengentelezi uyakwazi ukuvikela umnikazi walo emathonyeni amabi nemicabango ongaphakeme.
Ngokungangabazeki, imbazo Perun - umnakekeli amaqhawe, athwala ngayo amandla ezempi. Labo wabalwela abantu bakhe futhi umhlaba, ivikela empini kuzothatha ingozi.
Namuhla, le njengentelezi ingasetshenziswa kabanzi: kungaba ngcono ukuphikelela nokuphikelela, ukuzimisela nesibindi nabantu abangasithandi ezihlobene sphere wezempi.
Lokhu Arcanum ivikela hhayi kuphela kumnikazi wayo, kodwa futhi umndeni wakhe. It wasetshenziselwa ezimweni eziningi ezahlukahlukene kukho konke ukuphila. Ngakho, ukuvikela indlu emimoyeni emibi, imbazo ukwelula ku isakhiwo esikoleni. Ukuvikela abasanda kushada emshadweni, ukuze kungabikho muntu bangalimali kanti akusona isiqalekiso, azungeze abasha uchazele ikhomishana ngokutshalwa umbuthano ngembazo. Ukuze uxoshe kusuka endlini lapho owesifazane ebeletha, imimoya emibi, embundwini ukubeka lezi zikhali. Axe hit ebhentshini, lapho othile ufile, bekholelwa ukuthi ngaleyo ndlela "hook" futhi wadingiswa Ukufa.
Classics izincwadi emhlabeni: ukuchaza kusifundisa